Samsung Gear S3 ga-akwụ ụgwọ na 399 euro ma dakọtara na iPhone | Akụkọ akụrụngwa
Naanị ụnyaahụ na IFA 2016 Samsung gosipụtara ya ọhụrụ Gear S3, nke ọnụahịa ya nọgidere na ntanetị, nke anyị maara taa maka ozi leaked. Na mgbakwunye, anyị makwaara ozi ọma na ọtụtụ n'ime anyị tụrụ anya na nke ahụ bụ Ihe ngosi ohuru nke ụlọ ọrụ South Korea ga-adaba na Apple's iPhone.
Banyere ọnụahịa, ụdị abụọ nke GHear S3 ọhụrụ a, Classic na Frontier, ga-akwụ ụgwọ na 399 euro. Nke a n'eziokwu na-ewelite ọtụtụ obi abụọ ebe ọ bụ na ọ na-ada ụda na nsụgharị abụọ ahụ ga-enwe otu ọnụahịa, mana ugbu a Samsung ekwetaghị ozi ọma ahụ na onye na-ekwuchitere ya nso na ụlọ ọrụ ahụ weere na ọ dị mma ma zie ezi.
Ọzọ uru nke Gear S3 bụ na ha ga-emecha dakọtara na Apple si iPhone. Taa enwere ugbua ikpe ikpe nke na-enye gị ohere ijikọ ma Gear S2 dị ka Gear Fit 2, ma o doro anya na ngwa nwere ike adịghị anya a ga-oru ulo oru nke mere na ọ nwere ike ibudata na a nkịtị ụzọ si App Store.
N'oge Gear S3 nwere naanị awa ole na ole nke ndụ na ahịa, mana ha ahapụla ihe karịrị otu onye ọrụ na ọnụ ha meghere bụ onye chọpụtala na ọ joyụ na ndozi karịa ụdị gara aga dị ọtụtụ, na ọnụahịa ha abụghị gabiga ókè nakwa na ha nwekwara ike iji ha na-enweghị nsogbu ọ bụla na ngwaọrụ Apple.
Kedu ihe ị chere maka ọnụahịa nke Samsung Gear S3 ga-enwe na ahịa?.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Ngwa » smartwatch » Samsung Gear S3 ga-akwụ ụgwọ ọnụahịa na 399 euro ma dakọtara na iPhone
Apple ga-eri ọtụtụ elekere